Translations < Myanmar (Burmese) < Really Simple Portfolio < GlotPress — WordPress
Translation of Really Simple Portfolio: Myanmar (Burmese)
Filter ↓ • Sort ↓ • All (37) • Untranslated (13) • Waiting (0) • Fuzzy (0) • Warnings (0)
Continue reading %s <span class="meta-nav">&rarr;</span> %s အား ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် <span class="meta-nav">&rarr;</span>	 Details
%s အား ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် <span class="meta-nav">&rarr;</span>
Pages: စာမျက်နှာများ - Details
It seems we can&rsquo;t find what you&rsquo;re looking for. Perhaps searching can help. သင်ေတွ့လိုသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ရှာမေတွ့ပါ။ ရှာဖွြေခင်းမှ အကူအညီရနိုင်ေလာက်သည်။	 Details
Ready to publish your first post? <a href="%1$s">Get started here</a>. သင့်ပထမဆုံးစာမူကို ထုတ်ဝေရန် အသင့်ဖြစ်ပြီလား။ <a href="%1$s">ဒီမှာ စလိုက်ပါ။</a>။	 Details
Nothing Found ဘာမှ မတွေ့ပါ	 Details
Search Results for: %s %s အတွက် ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု ရလဒ်များ	 Details
Edit ပြင်ရန်	 Details
% Comments မှတ်ချက်များ % ခု	 Details
1 Comment မှတ်ချက် ၁ ခု Details
မှတ်ချက် ၁ ခု
Leaveacomment မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါ။	 Details